Talen’ny seraseran’ny prezidansa, Rinah Rakotomanga: “Efa natsangana ny vaomiera hanadihady ilay volamena…” | NewsMada
Talen’ny seraseran’ny prezidansa, Rinah Rakotomanga: “Efa natsangana ny vaomiera hanadihady ilay volamena…”
Nitondra fanazavana momba ny raharaham-pirenena ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny Repbolika, Rinah Rakotomanga. Anisan’izany ny momba ilay volamena sarona tatsy Afrika Atsimo, zary mbola miteraka resabe amin’izao fotoana izao.
“…Tsy ny hanome vaovao ny mpanao gazety no nahamaika fa ny fanadihadiana momba io volamena tratra tany Afrika Atsimo io. Misy ny vaomiera manokana napetraky ny filoham-pirenena hanao fanadihadiana sy mandray an-tànana ahafahana mamerina ireo harem-pirenena sy ireo olona nanao trafika mba hotsaraina aty Madagasikara”, hoy izy tao amin’ny fahitalavitra iray, afakomaly alina. Anisan’ny lehibe ao anatin’izany ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, ny minisitry ny Fitsarana, ny Filaminana anatiny, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Raharaham-bahiny.
Tsy misy atahoran’ny fanjakana
Nohitsiny fa aleo ireo tompon’andraikitra ireo no hiteny ny tena fandehan’io raharaha io. Nanteriny fa tsy misy atahoran’ny fanjakana ao anatin’io satria efa mametraka ny lalàna sy manenjika ny mpandika lalàna ny fanjakana. Notsiahiviny fa efa natsahatry ny fanjakana ny 20 oktobra 2020 ny fanondranana volamena. “Tafiditra ao anatin’ny tambajotrana mafia io na inona na inona lazaina. Tsy vao izao no niseho ny fanondranana antsokosoko harem-pirenena. Tsy anjarako, tsy anjaranao ary tsy anjarantsika ny mitsara fa aleo ny tompon’andraikitra amin’izany hanao ny asany”, hoy ihany izy.
Aleo handeha ny fanadihadiana
Etsy andaniny, nambarany koa anefa fa tokony hohajaina hatrany amin’ny raharaha tahaka izao ny zo amin’ny maha mbola tsy voaheloka. Rariny koa raha aty Madagasikara no tsaraina ireo mpanao trafika ireo. Nitondrany valin-kafatra koa ny filazan’ny sasany fa afaka hatrany ny trondro vaventy amin’ny raharaha lehibe tahaka ireny. “Pirina sa trondro vaventy ve ny sekretera jeneralin’ny ACM? Izy no nanome alalana izany. Tsy miteny koa anefa aho hoe meloka izy na tsia. Samy mba te hahafantatra isika izao satria mpambotry firenena izany. Familiviliana resaka sy fanimbana olona no betsaka, azo atao ny manendrikendrika olona iray… Aleo handeha ny fanadihadiana ahitantsika ny ho tohiny”, hoy ihany ny talen’ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny Repbolika.